Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Enwere ihe karịrị otu ụzọ iji ruo Amsterdam site na Paris. Ma mgbe ha na ihe niile abịa na ha pro na ọghọm, njem site na Paris na Amsterdam ụgbọ okporo ígwè na-anọgide na ndị kasị mma nhọrọ mgbe ị na-eme na-atụnyere. We give you all the reasons why train…
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji Ejegharị ụgbọ okporo ígwè pụrụ ịbụ otu n'ime ndị kasị izuike na-atọ ụtọ ụzọ na-gburugburu. Mkpa ka ị mara otú ka ihe kasị mma nke gị na njem na-smart. Bụ onye a haziri nke ọma na ịmara ihe na-aga ogologo oge ịme…